ဘီစီစုံစမ်းစစ်ဆေး ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ ဘီစီစုံစမ်းစစ်ဆေး အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
Soar Technology Co., Ltd ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ ဘီစီစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံနှုန်းများကိုပံ့ပိုးမှုများပိုမိုလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းအတွက်တီထွင်သော။ ကျွန်တော်တို့ဟာအကောင်းဆုံး efficiency နဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များရှည်လျားနောက်ဆုံးရေရှည်တည်တံ့သောစွမ်းရည်နှင့်အတူဖောက်သည်များစိတ်ကျေနပ်စေကြောင့်လူသိများကြသည်။ တစ်ခုလုံးကိုဆွဲဆောင်မှုအကွာအဝေးယှဉ်ပြိုင်မှုဈေးကွက်ဈေးနှုန်းမှာငါတို့ထံမှ availed နိုင်ပါသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါကဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်မသွားပါ။
Prob beryllium copper ကိုအဆက်အသွယ်နည်းခြင်းသို့မဟုတ်မြင့်မားသော current အတွက်မကြာခဏအသုံးပြုသည်.အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ,၎င်း၏ခိုင်မာသောဝိသေသလက္ခဏာများအတော်လေးနိမ့်ဖြစ်ကြသည်,wear ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဒါ,အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများထက်ပိုမြန်လိမ့်မည်.
ဘီရီလီယမ်၏ကြေးနီစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကို wafer body သို့ခွဲခြားထားသည်.အစဉ်အလာအဖြိုက်နက်ဆေးထိုးအပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်,ဘီရီလီယမ်၏ကြေးနီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပျော့ပြောင်းမှုသည်ပိုမိုမြင့်မားပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်.ယေဘူယျအားဖြင့်,ဘာရီလီယမ်၏ကြေးနီကြိုးများကို LED နှင့် LCD စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အထူးထုတ်လုပ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားသည်.၎င်းသည်တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ထိရောက်သောကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပေးသောဖောက်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.probe-needles.com/my/bc-probe.html
အကောင်းဆုံး ဘီစီစုံစမ်းစစ်ဆေး ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် ဘီစီစုံစမ်းစစ်ဆေး ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ ဘီစီစုံစမ်းစစ်ဆေး ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
အဆိုပါအာကာသယာဉ်စုံစမ်းစစ်ဆေးကဒ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်,အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းနှင့်စမ်းသပ်စက်အကြား interface ကိုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်,wafer test ကိုအမှန်တကယ်စမ်းသပ်လို့ရတယ်.စုံစမ်းစစ်ဆေးအသုံးပြုမှု:၎င်းသည် probe card ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးချိတ်ဆက်ထားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုသည်.၄ င်းကိုထုတ်ကုန်များနှင့်မကောင်းသောထုတ်ကုန်များနှင့်ခွဲခြားရန်လျှပ်စစ်အချက်ပြချက်များကိုချစ်ပ်၏ pads များသို့ပို့ခြင်းဖြင့်သီးခြားစီစမ်းသပ်သည် ပစ္စည်း:Tungsten(WNP),ရီနီယမ်အဖြိုက်နက်(WRNP),P4,P7,ဘီစီ သတ်မှတ်ချက်များကိုဖောက်သည်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည် စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်မှုဖောက်သည်ပုံဆွဲခြင်းနှင့်နမူနာအရသိရသည်လုပ်နိုင်ပါတယ် တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးနှင့်အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့ မူရင်းထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ:အမေရိကန် ပြုပြင်ရာအရပ်:ထိုင်ဝမ်